विक्कीको कमेडी शो कस्सम याँ दुख्छ पनि तानतुन हो कि गिदी प्रयोग भएको गुदीसहित ! Ukeraa – Latest and featured news from Nepal.
तस्बिर : मेरोफिल्म डटकम
काठमाडौँ : ‘कमेडी च्याम्पियन २’का उप–विजेता विक्की अग्रवालले नयाँ शो ‘कसम याँ दुख्छ’ ल्याउने भएका छन्। कमेडी क्लब विथ च्याम्पियन्सको केही एपिसोडमा रहेका उनी एकाएक हराएका थिए।
कार्यक्रमको फर्म्याटमा उनी कार्यक्रम सञ्चालकको भूमिकामा देखिएका थिए। उनको अनुपस्थितिमा विशाल भण्डारी देखिइरहेका छन्। उनी काम विशेषले सो शोमा नदेखिएको हैन उनी नयाँ शोको तयारीमा थिए।
अब उनी प्राइम टेलिभिजनमा कमेडी च्याम्पियन्स-२ को प्रस्तुतिमा हिट भएको थेगोलाई नै कार्यक्रमको नाम दिएर कार्यक्रम लिएर आउने भएका छन्।
अहिले नै टेलिभिजनहरूमा छ्यापछ्याप्ती कमेडी सम्बन्धी कार्यक्रमहरू आइरहेका छन्। विशाल भण्डारीले नै कमेडी च्याम्पियन १ र २ प्रसारण गरेपछि अहिले कमेडी क्लब विथ च्याम्पियन लिएर आइरहेका छन् नेपाल टेलिभिजनमा।
उता एपीवान टेलिभिजनमा कमेडी हब नामक कार्यक्रम चलिरहेको छ। यता नेपाल टेलिभिजनमा प्रसारण हुने कमेडी क्लब विथ च्याम्पियन्स हास्ने जिम्मा दीपाश्री निरौलाले निभाइरहेकी छिन् भने कमेडी हबमा यो जिम्मा माग्ने बुढा अर्थात् केदार घिमिरेले पुरा गरिरहेका छन्।
कन्टेन्ट अनि कलाकारको अभिनयको हिसाबमा हेर्ने हो भने कमेडी क्लब विथ च्याम्पियन्स भन्दा कमेडी हब प्रभावकारी देखिन्छ।
भारतीय नागरिक विक्कीको कार्यक्रमको फर्म्याट सार्वजनिक भइसकेको छैन। उनी हिन्दी लवज मिश्रित नेपाली बोलीका कारण चर्चित छन्। अनि उनका रोस्ट कमेडीहरू पनि गहकिला हुने गरेका छन्। उनको कार्यक्रम पनि तानतुन फर्म्याट हो या केही गिदी प्रयोग गरेर गुदीसहित आउने हुन् त्यो कार्यक्रम प्रसारणपछि खुल्ने छ नै।